Ny hevitra manan-danja fahatelo amin'ny famindrana fanandramana tsotra dia fomba fiasa . Rafitra milaza amintsika ny antony na ny fomba fitsaboana iray nahatonga ny vokany. Ny fizotry ny fikatsahana ny mekanisma dia indraindray antsoina amin'ny fitadiavana ny fari-pitenenana tafiditra na ny fari-pahaiza-mandanjalanja . Na dia tsara aza ny fanandramana amin'ny fanombantombanana ny vokatra azo avy amin'ny voa, dia matetika izy ireo no tsy natao hanamboarana mekanika. Ny fanandramana dizitaly dia afaka manampy antsika hamantatra ireo fomba fiasa amin'ny fomba roa: (1) mamela antsika hanangona angon-drakitra misimisy kokoa ary (2) mamela antsika hitsapa fitsaboana maro mifandraika amin'izany.
Satria mazavazava kokoa ny fomba fiasa hamaritana ara-potoana (Hedström and Ylikoski 2010) , dia hanomboka amin'ny ohatra tsotra aho: limes and scurvy (Gerber and Green 2012) . Tao anatin'ny taonjato faha-18, azon'ny dokotera iray tsara ny fahatsapany fa rehefa nisakafo ny tantsambo dia tsy nahare fingotra izy ireo. Ny aretina mahatsiravina dia aretina mahatsiravina, noho izany dia fampahalalana mafonja izany. Saingy ireo dokotera ireo dia tsy nahalala hoe nahoana ny bala no nanakana ny scurvy. Tsy tamin'ny taona 1932, efa ho 200 taona tatỳ aoriana, dia afaka nilaza ny mpahay siansa fa vitamin C no antony nisorohana ny lokony (Carpenter 1988, 191) . Amin'io tranga io dia vitamin C ny rafitra izay manakana ny lozam-pangatsiahana (sary 4.10). Mazava ho azy fa ny famantarana ny rafitra dia tena manan-danja tokoa amin'ny siansa-maro ny siansa dia ny fahatakarana ny anton'izany. Tena zava-dehibe koa ny mamantatra ireo rafitra. Raha vao fantatsika hoe nahoana ny fitsaboana no miasa, dia mety hampivelatra fitsaboana vaovao isika, izay mbola tsara kokoa.
Sary 4.10: Ny felamoana dia misoroka ny lolo sy ny vitamin C.
Mampalahelo fa tena sarotra ny mitoka-monina. Raha oharina amin'ny kitrotro sy kirihitr'ala, amin'ny sehatra sosialy maro, dia mety miasa amin'ny fomba maro mifandray amin'ny fitsaboana ny fitsaboana. Na izany aza, amin'ny tranga ara-tsosialy sy ny fampiasana angovo, ny mpikaroka dia nanandrana nanavaka ireo rafitra tamin'ny alalan'ny fanangonana ny angon-drakitra sy ny fitiliana fitsaboana mifandraika amin'izany.
Ny fomba iray handinihan-tena amin'ny fomba azo atao dia ny fanangonana ny angon-drakitra momba ny fomba fiasan'ny fitsaboana amin'ny fomba mahomby. Ohatra, tsarovy fa ny Allcott (2011) naneho fa ny Herisetra momba ny angovo ao an-trano dia nahatonga ny olona hampidina ny fampiasany herinaratra. Saingy ahoana no nampidina ny fampiasana herinaratra ireo tatitra ireo? Inona avy ireo rafitra? Nandritra ny fandalinana fanaraha-maso, Allcott and Rogers (2014) niara-niasa tamina orinasa mpamokatra angovo izay nahazo fampahalalana momba ny fampihenana ny fitaovana ampiasainy amin'ny famolavolana paikady mahery kokoa amin'ny alalan'ny fandaharana fandaharana. Allcott and Rogers (2014) nahatsikaritra fa olona maromaro nandray ny Home Energy Reports no nampiakatra ny fitaovany. Saingy ity fahasamihafana ity dia tena kely loatra ka ny 2% amin'ny fihenan'ny fampiasana angovo ao amin'ny tokantrano nohazavaina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampivoarana ny fitaovana dia tsy ny rafitra manan-kery izay ahafahan'ny tatitra momba ny angovo momba ny angovo ao an-tsena ny fihenan'ny herinaratra.
Ny fomba faharoa handinihana ny mekanisma dia ny manandrana fanandramana amin'ny dingana kely amin'ny fomba fitsaboana kely. Ohatra, amin'ny fanandramana nataon'i Schultz et al. (2007) sy ny fanandramana momba ny angovo momba ny angovo momba ny angovo avy any an-tokantrano, dia nomena fitsaboana izay nanana fizarana roa lehibe (1) toro-hevitra momba ny tahirin-tsolika ary (2) fampahalalana momba ny fampiasana angovo ho an'ny namany (4.6). Noho izany, azo atao ny nanapa-kevitra fa ny tanjom-peo momba ny angovo no nahatonga ny fanovana, fa tsy ny fampahalalam-baovao. Mba hanombanana ny mety hahatonga ny toro-hevitra ho ampy fotsiny, i Ferraro, Miranda, and Price (2011) niara-niasa tamin'ny orinasa rano akaikin'i Atlanta, Georgia, ary nihazona fanandramana mifandraika amin'ny fitehirizana rano izay misy fianakaviana 100.000 eo ho eo. Misy fepetra efatra:
vondrona izay nahazo toro-hevitra momba ny famonjena rano
vondrona iray izay nahazo toro-hevitra momba ny famonjena rano miaraka amin'ny antso an-tsitrapo hitehirizana rano
vondrona iray izay nahazo toro-hevitra momba ny famonjena rano sy ny fomban-drazana ara-moraly hamonjena rano miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampiasana ny rano ho an'ny namany
Ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa ireo toro-hevitra ireo dia tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana rano ao anatin'ny taona fohy (taona iray), mahazatra (roa taona), ary maharitra (telo taona). Ny toro-hevitra momba ny fitsaboana manokana dia nahatonga ny mpandray anjara hampihenana ny fampiasana rano, saingy amin'ny fotoana fohy ihany. Farany, ny toro-hevitra fanampiny fampatsiahivana bebe kokoa momba ny fampahalalam-baovao dia nahatonga ny fampihenana ny fampiasana amin'ny fotoana fohy, midina ary lava (sary 4.11). Ireo karazana fanandramana amin'ny fitsaboana tsy ampiasaina dia fomba iray ahafahana mamantatra ny ampahany amin'ny fitsaboana-na ny ampahany miampy-dia ireo izay miteraka vokatra (Gerber and Green 2012, sec. 10.6) . Ohatra, ny fanandraman'i Ferraro sy ny mpiara-miasa dia mampiseho antsika fa ny tondra-drano momba ny rano fotsiny dia tsy ampy hampihenana ny fampiasana rano.
Sary 4.11: Ny vokatry ny Ferraro, Miranda, and Price (2011) . Ny fitsaboana dia nandefa ny 21 May 2007, ary ny vokatr'izy ireo dia nodinihina nandritra ny taona 2007, 2008, ary 2009. Nifanditra ny fitsaboana, nanantena ireo mpikaroka fa hanana fomba fijery tsara kokoa ireo rafitra. Ny toro-hevitra - ny fitsaboana tsy dia misy vokany amin'ny fohy (herintaona), medium (roa taona), ary maharitra (telo taona). Ny toro-hevitra momba ny fitsaboana manokana dia nahatonga ny mpandray anjara hampihenana ny fampiasana rano, saingy amin'ny fotoana fohy ihany. Ny toro-hevitra fanampiny mitaky fampahafantarana bebe kokoa momba ny fampahalalam-baovao dia nahatonga ireo mpandray anjara hampihenana ny fampiasana rano amin'ny fotoana fohy sy miditra ary lava. Ny bara mitsivalana dia azo vinavinaina amin'ny fahatakarana fahatokisana. Jereo ny Bernedo, Ferraro, and Price (2014) ho an'ny fitaovana fianarana marina. Nifanaraka tamin'ny Ferraro, Miranda, and Price (2011) , latabatra 1.
Raha ny tena marina, ny iray dia handroso mihoatra ny fanoratana ny singa (torohevitra, toro-hevitra, fiangarana, toro-làlana, fiangarana hafa) ho an'ny famolavolana fanao feno - indraindray antsoina hoe \_(2^k\_) Ny singa telo dia notsapaina (latabatra 4.1). Amin'ny fanandramana ny fitambaran'ny singa rehetra, ny mpikaroka dia afaka manombana tsara ny fiantraikan'ny singa tsirairay mitokana sy miaraka. Ohatra, ny fanandramana an'i Ferraro sy ireo mpiara-miasa dia tsy manambara raha ny fampitahàna ny mpiara-belona fotsiny dia ho ampy raha mitarika ho amin'ny fanovana maharitra. Tamin'ny lasa, ireo tetikasa feno tanteraka ireo dia sarotra ny mihazakazaka satria mitaky mpandray anjara marobe izy ireo ary mitaky ireo mpikaroka mba hahafahany mifehy tsara sy manome fitsaboana maro. Saingy, amin'ny toe-javatra sasany, ny taonan'ny dizitaly dia manala ireo fetra ara-logistika.
Tabilao 4.1: Ohatra momba ny fitsaboana amin'ny endrika noforonina tanteraka amin'ny elanelana telo: toro-hevitra, fangatahana, ary fampahafantarana
5 Hevitra + mifandraika
6 Torohevitra + fampahalalana mitovy
8 Hevitra + mifintina + momba ny mombamomba anao
Raha fintinina, dia tena zava-dehibe ny fomba fiasa-ny lalana manasitranana ny fitsaboana. Ny fanandramana nomerika fahaefatra dia afaka manampy ny mpikaroka hahalala mikasika ny mekanisma amin'ny alalan'ny (1) fanangonana ny angon-drakitra momba ny dingana ary (2) ahafahana mamorona tetikasa feno. Ny soso-kevitra soso-kevitr'ireo fomba famolavolana ireo dia azo zahana avy hatrany amin'ny fanandramana natao manokana mba hisorohana ny rafitra (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) .
Amin'ny ankapobeny, ireo foto-kevitra telo ireo-ny fahamendrehana, ny heterogeneity ny vokatra momba ny fitsaboana, ary ny rafitra-dia manome hevitra marobe matanjaka amin'ny famolavolana sy fandikana ny fanandramana. Ireo hevitra ireo dia manampy ireo mpikaroka mandehandeha mihoatra ny fanandramana tsotra momba ny "asa" ho an'ireo fanandramana tsara kokoa izay manana rohy matotra amin'ny teoria, izay manambara ny toerana sy ny antony anaovana ny fitsaboana, ary mety hanampy ny mpikaroka hanomana fitsaboana mahomby. Noho ny antony ara-kevitra momba ny fanandramana dia izao aho dia hitodika amin'ny fomba ahafahanao manao ny zavatra niainanao.